Askari Maandooriye soo cabay oo xalay qof Shacab ah si barer ah ugu dilay Magaalada Muqdisho « AYAAMO TV
Askari Maandooriye soo cabay oo xalay qof Shacab ah si barer ah ugu dilay Magaalada Muqdisho
514 Views Date March 12th, 2014 time 7:37 am
Askari katirsanaa Ciidanka Booliiska Dowlada Soomaaliya oo la sheegay in uu cabsanaa ayaa qof rayid ah xalay waxa uu ku dilay Degmada Xamar Weyne ee Gobolka Banaadir kadib markii uu muran dhax maray .
C/llaahi sahal Gardhuub Gudoomiyaha degmada Xamar weyne oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Askari Booliiska Katirsan oo isticmaalay Maandooriye Xamar Weyne ku dilay nin kale uu isna sheegay in uu cabsanaa .
‘’ Ciidamada amaanka ayaa kudaba jira Askariga dilka geestay oo la bar garanayo kaa oo lagu Magacaabo Xuseen Khaliif ,waxa uuna dilay nin rayid ah oo isna lagu Magacaabo Cabdulaahi Cabdi Shire ‘’ ayuu yiri Gudoomiyaha Degmada Xamarweyne.
Gudoomiyaha Degmada Xamar Weyne ayaa Dowlada Soomaaliya ugu baaqay in ciidanka laga saaro askarta cabtoyda ah uu sheegay in dhibaato xoogan shacabka ku hayaan iyagoo adeegsanaya hubka Dowlada.
Ciidamada Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa inta badan lagu eedeeyaa in ay isticmaalaan maandooriyaal waxa ayna taasi keentay in mararka qaarkood dad rayid ah ay dilaan ama dhibaatooyin kale u geestaan.